Ukusakazeka kwe-Ultrasonic kweNanomatadium (Nanoparticles) - Hielscher Ultrasound Technology
Ama-nanomaterials abe yingxenye ebalulekile yemikhiqizo ehlukahlukene njengezinto zokusebenza eziphezulu, ama-sunscreens, ukumbozwa kokusebenza, noma izinhlanganisela zepulasitiki. I-Ultrasonic cavitation isetshenziselwa ukusabalalisa izinhlayiya zosayizi we-nano zibe uketshezi, njengamanzi, uwoyela, izinyibilikisi noma izinhlaka.
Ukusakazeka kwe-Ultrasonic kweNanoparticles
Ukusetshenziswa kwe Ukusakazeka kwe-Ultrasonic kweNanoparticles inemiphumela eminingi. Okusobala kakhulu ukuthi nizihlakaza materials e uketshezi ukuze ngiphule um kuyizinhlayiyana agglomerates. Enye inqubo ukusetshenziswa ultrasound ngesikhathi kuyizinhlayiyana kuhluta kwezulu. Ngokuvamile, lokhu kuholela izinhlayiya ezincane kakhulu futhi ngakhula usayizi ukufana. cavitation ultrasonic ngcono sokudluliswa kwezinto ngesikhathi kuyizinhlayiyana evele, futhi. Lo mphumela ingasetshenziswa ukuthuthukisa ebusweni Ukusebenza materials kokuba okusezingeni eliphezulu surface area ethize.
Zimhlakazile kanye Usayizi Ukuncishiswa nanomaterial
Nanomaterial, isib metal oxides, nanoclays noma ngama-carbon nanotubes bavame ukuba agglomerated lapho zixutshwe uketshezi. izindlela eziphumelelayo deagglomerating futhi Ukuhlakazeka kudingeka ukuze sinqobe amandla Ubuhlobo obuseduze ngemva wettening powder. Ukwaliwa ultrasonic izakhiwo agglomerate e ukumiswa aqueous futhi okungezona aqueous ivumela sisebenzisa amandla aphelele nanosize izinto. Uphenyo endaweni nginihlakaze ezihlukahlukene nanoparticulate agglomerates nge okuqukethwe variable okuqinile iye yabonisa ukuba inzuzo enkulu ultrasound uma iqhathaniswa nezinye ubuchwepheshe, ezifana Rotor stator labathaki bamafutha (turrax isb ultra), piston homogenizers, noma izindlela Milling ezimanzi, isib amaconsi ematsheni okugaya noma Colloid Mills. izinhlelo ultrasonic Hielscher kungenziwa qalisa esiqalisweni kahle eliphezulu ukudla okuqinile lokuhlala. Ngokwesibonelo ngoba Silica izinga zokugwema ukuphuka kwatholakala ukuthi ukuzimela okuqinile lokuhlushwa kufika ku-50% ngesisindo. Ultrasound singasetshenziswa for zimhlakazile emakamu eliphezulu master-amaqoqwana - icubungula ongaphakeme futhi high viscosity uketshezi. Lokhu kwenza ultrasound ukucutshungulwa ezinhle isixazululo upende ezinengilazi, esekelwe abezindaba ehlukene, ezifana namanzi, resin noma uwoyela.
I-homogenizer ye-ultrasonic UP400St ukusakazwa kwe-nano
Chofoza lapha ukuze ufunde kabanzi mayelana zimhlakazile ultrasonic ka ngama-carbon nanotubes.
Ukuhlakazwa kanye deagglomeration by ultrasonication kubangelwa cavitation ultrasonic. Lapho eneka ketshezi ultrasound amaza omsindo asakaze ku umphumela ketshezi kushintshana ephezulu ingcindezi futhi ephansi kwengcindezi nowe. Lokhu kusebenza ukucindezeleka mechanical phezu amabutho edonsa ephakathi izinhlayiya ngamanye. cavitation ultrasonic e uketshezi kubangela speed eliphezulu Jets liquid of afinyelela ku 1000km / hr (abangu. 600mph). Jets ezinjalo cindezela liquid at ingcindezi eliphezulu ephakathi izinhlayiya zihlukanise kubo komunye nomunye. izinhlayiya ezincane kuthiwa yashesha ne Jets liquid futhi kungqubuzana ngesivinini. Lokhu kwenza ultrasound an izindlela ephumelelayo for zimhlakazile kodwa nezalo Ukukhokha ka Micron-usayizi kanye sub Micron-usayizi izinhlayiyana.
Ultrasonically Assisted Particle Synthesis / Inzika
Nanoparticles kungenziwa elakhiwe ekujuleni-up by synthesis noma kwezulu. Sonochemistry ingenye amasu zokuqala esetshenziswa ukulungiselela nanosize compounds. Suslick emsebenzini wakhe wasekuqaleni, sonicated Fe (CO)5 noma njengoba uketshezi wekugcina noma isixazululo deaclin futhi wasitholela usayizi 10-20nm amorphous yensimbi nanoparticles. Ngokuvamile, ingxube supersaturated eqala ukwakha izinhlayiya esiqinile aphume elinama bagxila kakhulu. Ultrasonication ngcono ukuxuba pre-cursors futhi kukhulisa mass-ukudluliselwa e-surface kuyizinhlayiyana. Lokhu kuholela ezincane usayizi kuyizinhlayiyana nekufana ephakeme.
I-UIP2000hdT, i-2kW i-ultrasonicator enamandla yokusabalalisa i-SWCNTs.
Chofoza lapha ukuze ufunde kabanzi mayelana kwezulu ultrasonically isizwa of nanomaterial.
Surface Functionalization Ukusebenzisa ultrasound
nanomaterial Abaningi njengoMariya metal oxides, inkjet inki kanye Toner zombala, noma fillers ngokusebenza ezinengilazi, Adinga ubuso functionalization. Ukuze functionalize kwamanzi okuphelele ngamunye kuyizinhlayiyana ngazinye, a ukuhlakazwa indlela enhle okudingekayo. Lapho kuzo, izinhlayiya zivamise sizungezwe ungqimba umngcele molecule ukhangwa kwamanzi kuyizinhlayiyana. Ukuze amaqembu amasha ukusebenza ukuya ebusweni kuyizinhlayiyana, lesi sendlalelo umngcele abanye kumele kuphele kwephulwe up noma zisuswe. I Jets liquid okubangelwa cavitation ultrasonic ongafinyelela ngesivinini afika ku 1000km / hr. Lokhu ukucindezeleka kusiza ukuba sinqobe amandla edonsa futhi liqukethe amangqamuzana ukusebenza kuze kwamanzi kuyizinhlayiyana. Ngo Sonochemistry, Lo mphumela kusetshenziswa ukwenza ngcono ukusebenza catalysts bahlakazeka.
Ultrasonication phambi Particle Usayizi Kukhuluma
Ultrasonication amasampuli ngcono ukunemba usayizi wesithombe sakho kuyizinhlayiyana noma morphology nesilinganiso. I SonoStep entsha ihlanganisa ultrasound, ibangele futhi ukudonsa amasampula e umklamo ezihlangene. Kulula usebenza futhi ingasetshenziswa ukuletha amasampula sonicated kumadivayisi ahlaziye, ezifana ubukhulu kuyizinhlayiyana analyzers. I sonication okukhulu kusiza ukuhlakaza izinhlayiya agglomerated okuholela imiphumela okungaguquguquki.Chofoza lapha ukuze ufunde kabanzi!
Ultrasonic Icubungula for Lab Nokusalungiswa Scale
izilimi Ultrasonic futhi ukugeleza amaseli I-deagglomeration kanye ukuhlakazwa ziyatholakala I-Laboratory futhi ukukhiqizwa ezingeni. I izinhlelo zezimboni kalula retrofitted ukusebenza uxhumekile kwi-inthanethi. Ngokuba ukuthuthukiswa ucwaningo kanye nenqubo sincoma usebenzisa UIP1000hd (1,000 Watts).
Hielscher inikeza ezibanzi amadivayisi ultrasonic kanye izesekeli for the zimhlakazile ephumelelayo nanomaterial, isib e upende, uyinki ezinengilazi.
amadivaysi laboratory Compact afika ku Watts 400 amandla.
Lezi amadivayisi ikakhulukazi esetshenziselwa ukulungiselela isampula noma kokuqala ucwaningo lokuhlola ukuthi kuzokwenzeka futhi ayatholakala ukuqashwa.
500 futhi 1,000 futhi 2,000 Watts Processors ultrasonic like the UIP1000hd setha nge flow cell kanye booster izimpondo ehlukahlukene sonotrodes bakwazi ukucubungula ezinkudlwana volume ukusakaza.
Amadivayisi kanje asetshenziswa nokwenza kahle we nemingcele (efana: amplitude, ingcindezi tekusebenta, flow rate njll) e ebhentshini-top noma umshayeli isitshalo esikalini.
izilimi Ultrasonic of 2kW, 4kW, 10kW futhi 16kW kanye namaqoqo enkulu amayunithi eziningana ezinjalo kungaba ukucubungula ukukhiqizwa umthamo ukusakaza cishe kunoma iyiphi ezingeni.
Imishini ephezulu yeBench iyatholakala ekuqashisweni ngezimo ezinhle zokuqalisa izivivinyo z inqubo. Imiphumela yolingo olunjalo ingalinganiswa ilinganiswe nezinga lokukhiqiza - inciphise ubungozi nezindleko ezibandakanyekile ekuthuthukisweni kwenqubo. Sizokujabulela ukukusiza online, ocingweni noma mathupha. Sicela uthole amakheli ethu laphaNoma usebenzise ifomu elingezansi.
Ama-nanomaterials – Indaba Enikeza Isizinda
Nanomaterial kukhona izinto engaphansi kuka 100nm ngosayizi. Basuke ngokushesha ethuthuka zibe ukwakhiwa of upende, uyinki ezinengilazi. Nanomaterial zingena ngaphansi kwezigaba ezintathu ezibanzi: metal oxides, nanoclays, futhi ngama-carbon nanotubes. Metal-nitrous nanoparticles, zihlanganisa nanoscale zinc oxide, titanium oxide, yensimbi oxide, cerium oxide ne zirconium oxide, kanye okuxubile-metal yingxube njenge indium-tin oxide ne zirconium kanye titanium, kanye okuxubile-metal yingxube njenge indium oxide -tin. Lokhu Kuncane kunemtselela eyala eziningi, ezifana-physics, I-Chemistry eziphilayo. Ngo upende ezinengilazi nanomaterial ukufeza izidingo zokuhlobisa (isb umbala isicwebezelisi), ukufeza izinhloso zokusebenzisa (isb conductivity, inactivation microbial) futhi sithuthukise Ukuvikelwa (isb ekuqaleni ukumelana, UV ukuzinza) upende ezinengilazi. Ikakhulukazi nano-isayizi metal-oxides, ezifana TiO2 futhi ZnO noma Alumina, Ceria futhi Silica futhi nano-isayizi zombala uthole isicelo ezintsha upende bese enamathela ukwakhiwa.
Lapho ndaba kuyehla ngobukhulu iguquka izici zayo, ezifana nombala kanye nokuxhumana nezinye ndaba ezifana reactivity zamakhemikhali. Ushintsho izici kubangelwa ushintsho sezindawo electronic. by kuyizinhlayiyana Usayizi ukunciphisa, indawo yezinto ezibonakalayo yanda. Ngenxa yalokhu, amaphesenti aphakeme ama-athomu angakwazi ukuxhumana nezinye izinto, isib. Nge-matrix yama-resin.
Umsebenzi wokuqhamuka kuyisici esiyinhloko sama-nanomaterials. I-agggomeration ne-aggregation ivimbela indawo engaphezulu kusuka kokuxhumana nenye indaba. Izinhlayiyana ezihlakazekile kuphela noma ezihlakazekile zodwa zivumela ukusebenzisa okusemandleni okugcwele okubalulekile kwalolu daba. Ngenxa yalokho ukuhlakazeka okuhle kunciphisa inani lamanomaterials adingekayo ukuze kuzuzwe imiphumela efanayo. Njengoba ama-nanomaterials amaningi asalokhu ayabiza kakhulu, lesi sici sibaluleke kakhulu ekuthengiseni imikhiqizo eyenziwe nge-nanomaterials. Namuhla, ama-nanomaterials amaningi akhiqizwa ngenqubo eyomile. Ngenxa yalokho, izinhlayiya zidinga ukuxubene ekufakweni kwamanzi. Yilapho ama-nanoparticles amaningi enza ama-agglomerate ngesikhathi sokumanzisa. Ikakhulukazi ngama-carbon nanotubes kukhona athishela kakhulu okwenza kube nzima ngibasakaza phakathi uketshezi, njengamanzi, ethanol, uwoyela, polymer noma epoxy resin. Ezivamile ukucutshungulwa amadivayisi, isb ephezulu phuca noma Rotor-stator labathaki bamafutha, ephezulu ingcindezi homogenizers noma Colloid kanye disk Izigayo basilalelwe e esasihlukanisa nanoparticles zibe izinhlayiya ngokuqhubekayo. Ikakhulukazi ngoba ndaba encane evela nanometer eziningana ukuze ambalwa microns, cavitation ultrasonic siyasebenza kakhulu ngokuphula agglomerates, lokubolekwa ngisho primaries. Lapho ultrasound lisetshenziswa ukuze Ukukhokha ephezulu lokuhlushwa amaqoqwana, uketshezi Jets ukusakaza okubangelwa cavitation ultrasonic, wenze izinhlayiya zishayisane nomunye velocities afika ku 1000km / h. Lokhu iphula van der Waals amabutho ku agglomerates ngisho izinhlayiya eyinhloko.